आगो लाग्यो ? दमकल कुर्नु पर्दैन पाइप खोल्नोस्, निभाउनुहोस् – Khabarhouse
Khabar house | ११ माघ २०७६, शनिबार १५:२८ | Comments
उपेश महर्जन, काठमाडौं । कतै सानोतिनो आगलागी भयो भने पनि तपाईं हामी के गर्छौं ? एउटै मात्र उपाय दमकल बोलाउने र कुर्ने। दमल समयमा नै आइपुग्यो भने पनि साँघुरा गल्लीमा दमकल पुग्नै समस्या । थोरै संख्यामा दमकल त्यो पनि दिउँसो ट्राफिक जामले सल्केको आगो निभाउन दमकल कुर्दाकुर्दै धेरै क्षति पुग्ने गर्थ्याे । अहिले दमकल पस्न नसक्ने साँघुर घना बस्ती क्षेत्रमा उपयोगी हुने प्रविधि स्थानीय स्तरमै जडान शुरु गरिएको छ ।
यस्तो प्रविधिको परीक्षण काठमाडौंको घनावस्ती मध्यको एक ओमबहालमा शुक्रबार गरिएको छ । यस्तो उपकरण उपत्यकाका भित्री शहरमा झन् प्रभावकारी भएको देखिएको छ । विगतमा दमकल जान नसक्ने सो क्षेत्रमा आगलागीहुँदा आगो निभाउन चाँजोपाँजो मि लाउँदै गर्दा धेरै घरपूर्ण रुपमा खरानी भइसक्थ्ये । तर अहिले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो क्षेत्रमा पनि आगो निभाउन सकिने भएको छ ।
शुक्रबार ओमबहाल, यँगालमा एककिलोमिटर क्षेत्रभित्र विना दमकल आगोनियन्त्रण गर्न सकिने गरी पाइप बिच्छाउने तथा उपकरण जडान गरी त्यसको पूर्वअभ्यास गरियो। ३० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की सहित दमकलमा प्रयोग हुने पानी पम्प गर्ने उपकरण र डिजेल प्लान्टको सहायताले आगो नियन्त्रणगर्न सकिने प्रणालीको सफल परीक्षण भएको हो । यस्तो प्रणाली तयरा गर्न पानी ट्याङ्की, पानी पम्पगर्ने प्रविधि सहित करीब १५ लाखको रुपियाँ खर्च हुने बताइएको छ ।
काठमाडौँ महानगर पालिकाको वडा नम्बर २३ का वडाअध्यक्ष मचाराजा महर्जनका अनुसार उक्त परीक्षण सफल भएसँगै वडाका चारवटै कुनामा यस्तो प्रविधिजडान गरेर वडालाई आ’गलागीबाट हुने क्ष’तिबाट सुरक्षित गरिने छ । वडाको पूर्वउत्तरी मोहडामा वारुण यन्त्र ‘दमकल’भएकाले उरानचोक र बलम्पु चोकमा दुईवटा पानी ट्याङ्की निर्माधीन अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चारवटै पानीे ट्याङ्कीलाई दोश्रो चरणमा एक अर्कासँग जोड्ने काम हुने उहाँले बताउनु भयो । वडा अध्यक्ष महर्जनले गोरखापत्रलाई भन्नुभयो, ‘यंगाल र उरान चोकमा दुुईवटा डिजेल प्लान्ट स्थापना भए पछि छिमेकी वडाहरु २१,२२, १९ र २४मा आगोजन्य वि’पद आउँदासमेत यस प्रविधिमा भर पर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दुई तीनसय मिटरको दूरीमा आपत् पर्दा पानी तान्न सकिने व्यास्था मिलाइएको छ ।
काठमाडौंमा यस्तो व्यबस्था राणाकालीन समयमा मिलाइएको थियो । उहाँले विगतमा भएको राणाकालीन पाइप काठमाडौंमा केही स्थानमा देख्न सकिने भए पनि त्यो प्रविधिमा हाल पानीको व्यवस्था नभएको जानकारी गराउनु भयो। यस्तो प्रविधिमा पानी ट्याङ्की देखि एक किलोमिटर परसम्म दुईइन्चको पाइप मार्फत पाँच÷छ तल्लासम्मको आगो सजिल्यै निभाउन सकिन्छ ।
यस्तो परीक्षण शहरी योजना आयोग तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा विपद व्यवस्थापनको प्रयोगात्मक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओमबहालस्थित निर्माणाधीन धर्मभक्त माथेमा पार्कमा गरिएको थियो। सो प्रणालीको उद्घाटनका अवसरमा काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले दमकलआउनु भन्दापहिलानै हामी मानवीय उद्दारको लागि सक्षम हुने जानकारी दिनुभयो ।
विपद व्यवस्थापन समितिले यस प्रविधि सञ्चालनको लागि युवा जन शक्तिको समूह बनाउने तयारी थालेको छ । साथै,मानवीय उद्दारका लागि महानगरले नेपाल एम्बुलेन्स सेवासँग साझेदारी गरी सेवा दिइ रहेको बारेमा सबैमा जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद राजेश शाक्यले विपदमा मानवीय उद्दारका लागि सबै वडाहरुमा यस्ता कार्यक्रम लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।